Shir looga Hadlaayo Hormarinta Garoomada Dalka oo Ka Dhacay Magalaada Muqdisho. – STAR FM SOMALIA
Wadatashiga iyo wadashqeynta Wasaraadda Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee dowladda Federaalka iyo Wasaaradaha Gaadiidka ee dowlad goboleedyada ayaa looga hadlay kulankaan oo saddexdii bilba mar la qabto, waxaana si gaar ah diirada loogu saaray dib u dhiska Garoomada diyaaradaha dalka.
Kulanka oo uu shir Guddoominayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Xukuumadda Federaalka ah Soomaaliya Mudane Maxamed Salaad Oomaar ayaa waxaa goob joog ka ahaa Wasiirka ku xigeenka Wasaarada, Agasimaha guud, Wasiirada dowlad Goboleedyada ee dhanka Gaadiidka iyo xubno kale.
Agaasimaha Mashaariicda Horumarinta Garoomada diyaaradaha dalka ee Wasaaradda Gaadiidka Isxaaq Maxamed ayaa sheegay in sanadka cusub ee 2018-ka ay rajaynayaan ku guuleysiga dib u dhiska Garoomada Diyaaradaha dalka kuwooda muhiimka ah, si loo dar dargeliyo adeegyada duulimadka ee dalka.
Mas’uuliyiinta ka socday dowlad Goboleedyada iyo Madaxada sare ee Wasaaradda Gaadiidka ayaa inta uu socday kulanka isku waydaarsaday aragtida la xiriira xoojinta wadashaqeyta dowladda Federaalka iy dowlad Goboleedyada ee dhinaca Gaadiidka iyo Duulista Hawada.
Cali Gacal Gaaboow Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya ayaa tilmaamay in loo baahan wadajir iyo in laga wada shaqeeyo horumarinta dalka.
Tim Wabster oo ah Qabiir dhanka amniga ah kana socda dowladda Mareekanka ayaa kulanka ka sheegay in Amaanka Garoomada Diyaaradaha Soomaaliya ay yihiin kuwa la isku haleyn karo.
Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Soomaaliya Mudane Maxamed Salaad Oomaar ayaa sheegay in Wasaaraddu ay ka go’an tahay xoojinta wada shaqeynta dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda Federaalka, si loo gaaro himilooyinka Qaranka.
Kulanka markii uu soo idlaaday ayaa waxaa si wadajir Warbaabinta Qaranka ula hadlay Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Gadiidka iyo Duulista Hawada ee Soomaaliya Mudane Xersi Aadan Rooble iyo Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawaada ee dowlad Goboleedka Koofur Galbeed Mudane Cabdullaahi Aadan Axmed oo ku hadlay Afka dowlad goboleedyada, waxaana ay qireen in kulanku uu ku soo idlaaday Guul iyo xoojinta wadashaqeynta.
Kulankan ayaa ku soo beegmay xili Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya ay ku guuleysatay in Soomaaliya ay dib ula soo wareegto maamulka Hawadeeda oo markii hore laga maamulayay dalka Kenya muda dhowr iyo labaatan sano ah, isla markaana uu dhawaan xariga ka jaray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo.